Ukuqondiswa kwabafundi okusha »IHodges University
Uyemukelwa eHodges University!
I-New Student Orientation (NSO) yaseHodges University isiza oKlebe bethu bakaHodges ekulungiseleleni ulwazi lwakho!
Izinkinobho ezingezansi zizokukhombisa inqubo futhi zinikeze imininingwane ebalulekile mayelana neNyuvesi yethu. Qalisa manje futhi uvakashele noma nini lapho udinga usizo.
Umlayezo ovela kuMongameli uDkt Meyer
IHodges University - isikhungo esizimele esingenzi nzuzo - silungiselela abafundi ukuthi basebenzise imfundo ephakeme emisebenzini yabo yomuntu siqu, yobungcweti neyomphakathi.
Ukuze ufunde kabanzi ngokuthi kungani iHodges University iyunivesithi ehlukile eSouthwest Florida, chofoza lapha.
Yazi I-Campus Yakho
Yazi I-Campus Yethu
Isakhiwo sase-Fort Myers Campus U no-H
Isakhiwo saseFort Myers Campus U
Usizo lwezezimali nama-Akhawunti Wabafundi
Izinsizakalo zabafundi, uMbhalisi, kanye ne-Admissions
Isakhiwo se-Student Union Health Sciences - U
Bhalisa ku-inthanethi ngokusebenzisa i-HU Self-Service!
I-HU Self-Service ikuvumela ukuthi ubhalise noma ucele ukubhaliswa kwanoma iyiphi inkambo kuseshini ezayo, 24/7, 100% online:
Ngena ngemvume myHUgo
Ngaphansi kwesigaba se-HU Self-Service, chofoza ku-Registration and Degree Planning
Ukuqinisekisa uhlelo lwakho lwezifundo, chofoza ku-Hlela Nesheduli
Ukuzisebenzisela i-MyHUgo ne-HU
I-MyHUgo ingosi yezinsizakalo ezenzelwe abafundi base-Hodges University lapho bonke abafundi bengafinyelela khona ngokushesha ku-HU Self-Service. Nge-myHUgo, ungafinyelela imininingwane yakho yangasese futhi uqhube ibhizinisi lakho laseYunivesithi online.
Lapho ungena ngemvume kwi-portal MyHUgo isixhumanisi esiya ku-imeyili yakho sivela ekhasini eliyinhloko. IHodges izosebenzisa i-akhawunti yakho ye-imeyili yabafundi njengendlela esemthethweni yokuxhumana nawe.
Ngena ngemvume ku-MyHugo
ICanvas uhlelo oluku-inthanethi lwe-Learning Management System lwaseHodges University, lapho abafundisi nabafundi bangafinyelela ezintweni zezifundo, bathumele izabelo, baxhumane futhi basebenzisane online.
IHodges University inethimba le-IT elizinikele ukusiza abafundi ngezinkinga ezahlukahlukene zobuchwepheshe okungenzeka ukuthi banazo. Izitshudeni zingathumela futhi zilandelele isicelo sokwesekwa kwezobuchwepheshe ku-inthanethi, futhi ziseshe ukuxazulula izinkinga zokuzisiza nokuthi ulwazi lutholakala kanjani. Abafundi bazosebenzisa ikheli labo le-imeyili ne-password yabo ye-Hodges ukungena ngemvume.
IT Usizo Desk Support
Izincwadi zokusebenza zilapha ukukusiza ukhethe futhi uthole izinsiza. Noma ngabe udinga usizo lokusesha yolwazi lwelabhulali noma ukuzulazula kumanyuwali ye-APA, abasebenzi bomtapo wolwazi batholakala mathupha, ngocingo noma nge-imeyili.
Incwadi yabafundi izosebenza njengomhlahlandlela njengoba uqala futhi uqhubeka nomsebenzi wakho wezemfundo neHodges University.
Ikhathalogi yeyunivesithi izosebenza njengomhlahlandlela wezinqubomgomo zezikhungo zezemfundo eziqondene ngqo nezinhlelo zezifundo zeHodges University.
Imigomo nemibandela yokubhalisa inikeza isivumelwano phakathi komfundi neYunivesithi ngazo zonke izinjongo zokubhaliswa kwezifundo.
Ikhasi Lezinsiza Zabafundi
Ikhasi lezinsiza zabafundi liyatholakala kubo bonke abafundi lapho ungathola khona isilabhasi yezifundo, amahora ehhovisi lobuhlakani, okushicilelwe, kanye nemininingwane yokuxhumana yeminye iminyango yaseyunivesithi. Izitshudeni zingangena kuleli khasi ngokungena ngemvume ku-MyHUgo.
Ikhasi Lemithombo Yomfundi
Amaphakheji Wosizo Lwezezimali
Iphakheji yosizo lwezezimali ingahle ibe nenhlanganisela yezibonelelo, imalimboleko, kanye / noma imali yokufunda yokufunda. Ukutholwa kwale miklomelo kuncike ezingeni lezimali ezitholakalayo kanye nokufaneleka kwakho njengoba kunqunywe yiFree Application of Federal Student Aid (FAFSA).
Ukufundiswa & Imali
Ithimba lama-Akhawunti Wabafundi lingasiza ngokukhokhisa, ukuqonda izifundo kanye nezimali, ukusetha izinhlelo zokukhokha, nokuningi.
IHodges University inikela ngezindlela ezahlukahlukene zokukhokha uhlelo lokukhokha imali yokufunda kanye nezimali ezikhokhwa njalo ngenyanga ngeseshini. Ngemininingwane engaphezulu, abafundi bangangena kwi-MyHUgo yabo bese baya ku- Imininingwane ye-Akhawunti Yomfundi.
IHodges University isebenzisane neBankMobile ukunikela ngezinketho eziningi nokufinyelela okusheshayo ekubuyiselweni kwemali yakho.
Imisebenzi Yezempi Nezempi
EHodges University, uzothola ukuthi ukuba yi-Military Friendly akuyona nje into esiyishoyo, yizinga lokusekelwa elidlula kude nekilasi.
Ihhovisi lethu Lokuhlangenwe Nabafundi linabeluleki bezitshudeni abazinikele abalapha ukusiza abafundi ukuthi bathuthukise izinhlelo zezemfundo zesikhathi eside futhi babeke imigomo yesikhashana yokufeza lezo zinhlelo.
Shayela Ukwelulekwa Kwezemfundo ku-800-466-0019
Ukweluleka Ngezifundo Nge-imeyili
I-Career Services iyinsiza yamahhala yabafundi nama-alumni ukuze bafunde kabanzi ngemikhakha abayikhethile yemisebenzi futhi bathuthukise nezinhlelo zemisebenzi.
Izindawo Zokuhlala Abafundi
IHodges University iwasekela ngokuqinile amalungelo abafundi abakhubazekile okuba nokufinyelela okulinganayo emfundweni.
IHodges University izibophezele ekwakheni nasekulondolozeni indawo yokufunda lapho bonke abantu ababamba iqhaza emisebenzini yaseNyuvesi bangafunda ndawonye endaweni engenazo zonke izinhlobo zokuhlukunyezwa, ukuxhashazwa, ukwenzelela, ukubandlulula noma ukwesabisa.
Amalungelo Obumfihlo (FERPA)
Ngaphansi kwemihlahlandlela ye-FERPA, abafundi banelungelo (1) lokuhlola nokubuyekeza irekhodi labo labafundi, (2) ukufuna izichibiyelo kumarekhodi, (3) ukuvuma ukudalulwa, kanye (4) nokufaka isikhalazo.
IHhovisi laseHodges University of Campus Safety libeka phambili ukuphepha kwabafundi nganoma yisiphi isikhathi lapho kuvulwa khona ikhampasi.
Siyakuhalalisela, Usuqede ukuqondiswa kwabafundi abasha!
Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ujwayelene neHodges University kanye nomnyango wokuxhaswa kwabafundi otholakala kubo bonke abafundi. Njengomfundi, uzokwazi ukufinyelela kuleli sayithi kuwo wonke umsebenzi wakho eHodges. Asikwazi ukulinda ukukubona uhamba esiteji lapho sekuyithuba lakho lokuphothula iziqu!
Manje usunguHawk. Bheka ingxenye!
Ungakhombisa ukuziqhenya kwesikole sakho ngokuthenga online ku-Hawks Store yethu. Uzothola izinto ezahlukahlukene ongazisebenzisa, kusuka kumadrayivu e-USB nakuma-tumblers kuye ezingutsheni, naseHodges Hawk! Yini eyenza isitolo sethu sihluke? Kukho konke ukuthenga okuthengiwe, ingxenye yemali etholakalayo iya ku-Hawks Scholarship Fund.